Ikhabhinethi yokuJonga iingxangxasi e-Starved Rock
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAgata
Wamkelekile kwikhaya lethu e-Starved Rock! Sichulumancile kakhulu ukuba uhlale apha kwaye sinethemba lokuba uyolonwabela ixesha lakho kwi-Waterfall View Villa enombono we-Starved Rock Park. Nceda uzive ukhululekile ukusazisa xa kukho into oyifunayo okanye ukuba unayo nayiphi na inkxalabo. Ndilapha ukuze ndikuncede ngayo nayiphi na indlela endinokuyenza ngayo.
Kubonelelwe ngezinto ezisisiseko ezibandakanya amashiti amatsha kunye neetawuli ezintsha, ikofu encomekayo, itawuli yephepha, iphepha lendlu yangasese, isepha yokuhlamba izitya. Ukwanakho nofikelelo olupheleleyo kwiwasha yethu kunye nesomisi ukuba ufuna ukuhlamba impahla. Iibhedi kunye neetawuli zeesofa zokulala zikwigumbi lokulala elikhulu.
Ikhitshi lethu likuwe. Zive ukhululekile ukusebenzisa iimpahla zethu zokupheka, izixhobo kunye nezixhobo zombane njengoko kufuneka. Sinendawo eninzi yokugcina ekhoyo yokuthenga ukutya. Nceda ubeke izitya zakho kwi-dishwasher emva kokusetyenziswa kwaye usebenzise umatshini wokuhlamba ngaphambi kokuba uhambe. Nceda ubeke zonke iitawuli ezimdaka kumgangatho wokuhlambela phambi kokuba uhambe.
Kwigumbi lokuhlala uya kufumana imidlalo yebhodi, imidlalo yangaphandle, kunye neencwadi. Zenzelwe wena ukuba uzisebenzise, sicela ukuba uqinisekise ukuba zonke iziqwenga zisebhokisini kwaye uzibuyisele apho ubuzifumene khona phambi kokuba uhambe.
Kwigumbi ngalinye uya kufumana iTV enoluhlu lwamajelo ecaleni kwayo. Uluhlu lukwakwi-binder. ITV yiTV elumkileyo kwaye ungasebenzisa eyakho ingcaciso ukungena kwiYouTube, Netflix, Disney +, njl.,
Ikhaya lethu yindawo ekungatshayiyo. Ukuba ufuna umsi, nceda wenze oko ngaphandle ngaphambili kwaye ulahle imidiza yakho emva koko.
Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo!
Nceda uqhagamshelane nam nge-imeyile
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oglesby